Spotify dia efa mitsapa ny fanekena ny feo amin'ny fampiharana | Androidsis
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, Streaming
Spotify dia nampiditra endrika vaovao marobe tato anatin'ity volana ity. Ny fampiharana mozika mivantana dia miasa amin'ny fanatsarana vaovao, toy ny fameram-potoana hanapahana playback. Ankehitriny, naseho fa fisehoan-javatra mahaliana iray hafa no tonga amin'ilay fampiharana. Satria izy ireo izao fitsapana azy amin'ny fanekena ny feo. Ity fampiasa ity dia antenaina ho tonga afaka volana vitsivitsy.
Amin'izany fomba izany dia hanana ny fahafaha-manao ny mpampiasa mifanerasera amin'ny Spotify amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo. Fomba mora ampiasaina ny fampiharana streaming mozika amin'ny finday Android-nao. Ny fitsapana voalohany dia mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny fampiharana.
Amin'ny voalohany, ity asa ity dia natao ho an'ny dokam-barotra amin'ny profil. Noho izany ny mpampiasa dia afaka manaiky na manilika doka amin'ny alàlan'ny baiko am-peo. Izay manampy amin'ny fanatsarana ny fampiasana ny fampiharana. Satria manakana ny mpampiasa tsy hanelingelina ny fihainoany izany na hanodikodinany tanana ny fampiharana amin'ny fotoana tsy azony atao.
Na dia misy dokambarotra mahaliana ny mpampiasa aza, ny fomba ahafahanao mampiasa fampiroboroboana premium Spotify, tsy mila manokatra ny fampiharana ianao raha te hiditra amin'ity fampahalalana ity. Tsy maintsy hamaly amin'ny fanekena ianao momba izany ary hoentina any amin'ilay rohy voalaza ianao, izay ahafahanao manana fampahalalana momba ilay tolotra voalaza. Na dia tsy voahilika aza izany dia hivelatra ity fampiasana baiko am-peo ity.
Ny dingana voalohany amin'ity fampiasa ity dia raisina amin'ny Spotify amin'ity fomba ity. Tsy tena fantatsika hoe aiza ireo fitsapana ireo amin'ny fampiharana. Toa ny fikasana no afaka volana vitsivitsy dia azonao atao ny mampiasa azy. Saingy mbola tsy nanome daty hatreto ny orinasa.
Raha tsy misy fisalasalana dia dingana voalohany lehibe io. Azo antoka fa ny dingana manaraka dia ny mety fehezo ny fampiharana amin'ny fifehezana ny feo. Azontsika atao ny mangataka amin'i Spotify hilalao mora foana ireo mpanakanto tiantsika. Ho hitantsika ny fivoaran'ny fampidirana an'io asa io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Spotify dia manandrana ny fanekena feo amin'ny fampiharana